Maxaa Ka Jira In Neymar JR Shan Jeer Teleefan Ka Wacay Barcelona Si Uu U Weydiisto Soo Laabasho, Wakiilka Ahna Aabaha Xiddigan Oo Baraha Bulshada Kaga Jawaabay | JAALENEWS
Maxaa Ka Jira In Neymar JR Shan Jeer Teleefan Ka Wacay Barcelona Si Uu U Weydiisto Soo Laabasho, Wakiilka Ahna Aabaha Xiddigan Oo Baraha Bulshada Kaga Jawaabay
Published on January 11, 2019 by sky · No Comments
Wargeyska El Mund ayaa soo saaray war uu dhawaan ku shaacinayo in xiddiga Paris Saint-Germain ee Neymar JR uu jeclaan lahaa ku laabashada kooxdiisii hore ee Barcelona isla markaana uu tiraba shan jeer wacay isaga oo weydiisanaya soo rogaal celin.
“Weeraryahanka PSG ayaa la xidhiidhayay agaasimayasha Barcelona bilihii ugu dambeeyay tiraba shan jeer si uu ugala hadlo hal shay, Si uu u weydiisto inaykooxda dib ugu soo celiyaan” Ayuu wargeysku ku yidhi warbixin uu dhawaan baahiyay.
Aabaha dhalay xiddigan oo sidoo kale ah wakiilkiisa ayaa baraha bulshada gaar ahaan bart Instagram-ka kaga jawaab celiyay warkaas isaga oo ku tilmaamay mid been abuur ah oo aan sal iyo raad toona lahayn.
Wargeyska ayaa intaa ku daraya in aabaha Neymar uu ahaa midka hore ula xidhiidhay madaxweynaha kooxda ee Maria Bartomeu si lamid ah agaasimayasha kooxda
El Mundo ayaa sidoo kale xusaya in si ay Barcelona u tix geliso heshiiska Neymar uu aabihii u baahan doono inuu arrimaha sharciga ah ee ay kooxda isku hayaan sida inay lacago ka doonayaan Barca ay u balan qaaday 26 jirka kahor bixitaankiisii.
Haatan, Aabaha kabtanka Brazil qudhiisa ayaa warkan ku sifeeyay ‘War Been Abuur Ah’ si lamid ah sidii uu sameeyay Neymar toddobaadyo kahor markii ay soo baxeen warar la xidhiidhinaya isaga ku laabashada comp nou